कसरी मेरो आईफोन खोज्ने अफ गर्ने? - कसरी
तपाईं सुविधा बन्द गर्न को लागी केहि अकस्मात आवश्यकता हुन सक्छ। यो फोन कसैलाई दिईएको हुन सक्छ। हुनसक्छ तपाईंले यसलाई सेपको लागि एप्पल स्टोरमा छोड्दै हुनुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईंले आफ्नो फोनलाई कारखाना रिसेट गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने, यसले तपाईंलाई 'निस्क्रिय गर्न आवश्यक पर्दछ।मेरो आईफोन खोज्नुहोस्‘विकल्प।
यद्यपि यो विकल्पलाई निष्क्रिय गर्न गाह्रो काम हुन सक्छ। किन? किनभने त्यहाँ तीन ज्ञात विधिहरू छन् र तपाईंलाई थाहा थिएन कि कुन मार्ग तपाईंको लागि उपयुक्त छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईंलाई सुविधा कसरी प्रयोग गर्ने वा असक्षम गर्ने भन्नेबारे थाहा छैन भने, यो गाईडले तपाईंलाई जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा सिक्न मद्दत गर्दछ। त्यसो भए थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं!
अधिक आईफोन गाईडहरू:
उत्तम मार्गहरू बन्द गर्नका लागि मेरो आईफोन खोज्नुहोस्:
विधि # १: आईफोन सेटिंग्स
यो उत्तम हुनेछ यदि तपाईसँग एप्पल आईडी र पासवर्ड छ सेवा को निष्क्रिय गर्न को लागी सेटिंग्स को उपयोग गर्न को लागी। यी प्रमाणहरू बिना, तपाईं यी सेटि ofहरूको आदेश परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। सापेक्षिक रूपमा, तपाईले यो अन्य व्यक्तिको फोनका लागि गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईलाई तिनीहरूको आईडी र पासवर्ड थाहा छैन।
तपाईंको आईफोनको सेटिंग्समा जानुहोस्
तपाईं सेटिंग्स को शीर्ष मा आफ्नो नाम देख्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्।
आईक्लाउड विकल्पमा जानुहोस्, र त्यहाँ तपाईंले 'मेरो आईफोन खोज्नुहोस्' विकल्प पाउनुहुनेछ।
यदि बटन हरियो छ, सेवा सक्रिय छ। यसलाई निस्क्रिय पार्न यसमा ट्याप गर्नुहोस्।
यसले तपाइँको तपाइँको एप्पल आईडी र पासवर्ड माग्छ। कृपया तपाइँका पत्यारपत्रहरू प्रदान गर्नुहोस्।
सेवा निष्क्रिय हुनेछ।
यद्यपि यो विकल्पले मात्र काम गर्दछ यदि तपाईंसँग आफ्नो उपकरण छ। यदि तपाईंसँग उप्रान्त उपकरण छैन भने वा हालसालै तपाईंको फोनलाई नयाँ मोडेलमा परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईं पुरानो फोनको लागि बन्द गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ। अन्यथा, तपाइँ लगातार यसको बारे अपडेट र अधिसूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसको लागि, तपाईंले अनुप्रयोग वा वेबसाइट मार्फत यो गर्न आवश्यक पर्दछ।
विधि # २: आईक्लाउड वा वेबसाइट विधि
पहिले, तपाइँ नयाँ उपकरणमा तपाइँको फोन खोजी अनुप्रयोग खोल्न सक्नुहुन्छ, वा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ https://www.icloud.com/find
यी दुबै विकल्पहरूले तपाइँको यन्त्रहरू देखाउँछन् जुन तपाइँको आईडी अन्तर्गत दर्ता छन्
उपकरणको लागि चयन गर्नुहोस् तपाईले सेवा निस्क्रिय गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईंले यसको लागि कार्यमा क्लिक गर्नुपर्दछ।
त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् 'उपकरण मेटाउनुहोस्'।
पुष्टि गर्नका लागि तपाईका प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
एकचोटि यो मेटिएपछि, तपाई खाता हटाउन सक्नुहुनेछ यसलाई तपाईंको अनुप्रयोगबाट राम्रो तरीकाले हटाउनको लागि
के हुन्छ यदि तपाईंसँग एप्पल आईडी छैन?
एप्पल आफ्नो विश्व-वर्ग र अन्त प्रयोगकर्ता सुरक्षा को लागी परिचित छ। त्यसकारण, त्यहाँ कुनै पहुँच ज्ञात आधिकारिक वा कानूनी विधि छैन पहुँच गर्न र सक्रिय वा निस्क्रिय गर्न आधिकारिक एप्पल आईडी बिना यो। तपाईंसँग तपाईंको पत्यारपत्रहरू हुनु आवश्यक छ, वा व्यक्तिले उनीहरूको आईडी र पासवर्ड साझेदारी गर्नुपर्दछ यदि तपाईं उनीहरूको उपकरणको लागि यो गर्न चाहनुहुन्छ भने।
यदि तपाईंले आफ्नो आईडी वा पासवर्ड बिर्सनु भएको छ भने, तपाईं यसलाई आफ्नो उपकरण मार्फत पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सेटि Inहरूमा, त्यहाँ पासवर्ड र सुरक्षा जहाँ तपाईं पासवर्ड परिवर्तन गर्नका लागि चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले यसलाई किन सक्रिय गर्नुपर्छ?
हाम्रो जीवन हाम्रो स्मार्टफोनको वरिपरि घुम्छ। तिनीहरूले हाम्रो कागजातहरू आवश्यक कागजातहरूमा मूल्यवान जानकारी भण्डारण गर्न थाल्छन्। व्यक्ति वालेट भन्दा पनि आफ्नो फोन हराउने बारे बढी चिन्तित छन्। थप गरिएको सुरक्षाको लागि सुविधा सक्रिय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ, विशेष गरी जब तपाईं घर बाहिर वा सार्वजनिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईं थोरै ध्यानका साथ कोही हुनुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो फोन राख्नु भएको ठाउँमा बिर्सनुभयो भने यो एक व्यवहार्य सुविधा हो।
यहाँ केहि थप कारणहरू छन्:
यदि तपाईंले आफ्नो उपकरण हराउनुभएको छ भने, तपाईं यसलाई नक्सामा जीपीएस नेभिगेसन मार्फत मेरो उपकरण विकल्प फेला पार्नको लागि फेला पार्न सक्नुहुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं यी सबै एप्पल उत्पादनहरूको ट्र्याक राख्न एकल अनुप्रयोग प्लेटफर्ममा बहु एप्पल उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, यो तपाइँको एकल हब तपाइँको उपकरणहरू सुरक्षित राख्न को लागी हो।
यदि तपाईं घर वरिपरिको आफ्नो उपकरण फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले यसलाई कहीं राख्नु भएको छ र बिर्सनु भएको हुन सक्छ। तपाईं यसलाई सजिलैसँग आफ्नो उपकरणमा ध्वनि प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि, तपाईं अन्य उपकरणहरू वा पीसी मार्फत आधिकारिक आईक्लाउड वेबसाइट मार्फत अनुप्रयोग पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले आफ्नो यन्त्र हराउनुभएको छ वा चोरी भएको छ भने, त्यहाँ उपकरण लक गर्न तपाईंको लागि एक विकल्प छ। यसले व्यक्तिगत डेटालाई गलत हातहरूमा पर्नबाट रोक्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाइँ तपाइँसँग पुग्ने वा सम्पर्क गर्ने विवरणहरूको साथ प्रदर्शन सन्देश प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा उल्लेखनीय सुविधा हो जुन मानिसहरूलाई तपाईंलाई खोज्न र तपाईंलाई फोन दिन सजिलो बनाउँदछ।
यदि तपाईं डाटा नियन्त्रण गर्न र यसलाई दूरबाट मेटाउन चाहनुहुन्छ भने, यो अनुप्रयोगमार्फत गर्न सजिलो छ। त्यसकारण, मेरो आईफोन फेला पार्नुहोस् एक उल्लेखनीय सुविधा छ जुन तपाईं सक्रिय राख्नु पर्छ।
विकल्प किन असक्षम पार्ने?
सुविधा अक्षम गर्न असंख्य कारणहरू हुन सक्छन्, विशेष गरी यदि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई असुविधा उत्पन्न गर्दछ। यो असम्भव लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ सुविधा अक्षम गर्न को लागी धेरै कारणहरू छन्। यहाँ केहि धेरै साधारण मानिसहरु छन्।
एप्पल सेवा स्टोरले तपाईंलाई सुविधा निस्क्रिय गर्न भन्नेछ।
यदि तपाईं उपकरण दिईरहनु भएको छ वा कसैलाई बेच्नु भएको छ भने तपाईले यो सुविधा निष्क्रिय गर्नुपर्दछ
धेरै व्यक्ति नयाँ उपकरणहरूमा अपग्रेड गर्छन् र कि त टास गर्दछन् वा पुरानो उपकरणहरू दान गर्दछन्, जुन तपाईंलाई सुविधा निष्क्रिय गर्नु आवश्यक पर्दछ
हुनसक्छ तपाईसँग धेरै एप्पल उपकरणहरू छन् र ट्रयाकर सरलीकृत गर्न प्रत्येक उद्देश्यको लागि 'मेरो आईफोन खोज्नुहोस्' को बिभिन्न नेटवर्कहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ
सूचीबाट केहि उपकरणहरू हटाउन
कोही व्यक्ति जियोलोकेशन सेवाहरूमा विश्वास गर्दैनन् वा सुविधालाई निस्क्रिय गरेको जस्तो महसुस गर्दैन ब्याट्री र प्रदर्शन बचत गर्दछ
तपाईंसँग कारण जेसुकै होस्, तपाईंको आईफोनको बारेमा सबै कुरा सिक्न यो सधैं सही विकल्प हुन्छ। कहिलेकाँही, तपाईं आफ्नो साथीलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ, र यदि तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर जान्नु हुन्छ भने, तपाईं सहयोगी व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ।
मार्गनिर्देशनमा तीनवटा ज्ञात विधिहरू समेटिएको छ मेरो आईफोन खोज्नुहोस् जबसम्म तपाईंसँग बाध्यकारी कारण छैन, कृपया यी कुनै पनि विकल्पहरूको साथ अनुसरण गर्नबाट रोक्नुहोस्। जे भए पनि, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यी विकल्पहरू प्रयोग गर्न यो एकदमै सजिलो भयो। तपाईं यी चरणहरू कुनै पनि एप्पल उपकरणको लागि अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आईफोन मात्र होइन। याद गर्नुहोस्, सुरक्षा आजको डिजिटल संसारमा महत्त्वपूर्ण छ, र एप्पलले तपाईंलाई उपकरणको पूर्ण नियन्त्रण दिन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।
सर्वश्रेष्ठ वायरलेस चार्जिंग प्याड (२०२०)
NordVPN नेटफ्लिक्स - अब अमेरिका बाहिर Ease संग हेर्नुहोस्!
डिज्नी प्लस रोकुमा उपलब्ध छ
minecraft मिठाई र भयानक अनब्लक साइटहरू
वैध xbox प्रत्यक्ष कोड २०१ 2015
नि: शुल्क xbox प्रत्यक्ष सुनको कुनै प्रस्ताव छैन
डाउनलोड नगरीकन पूर्ण फिल्मका लागि नि: शुल्क फिल्म अनलाइन हेर्नुहोस्